Antony fandraharahana 15 hampiasana Twitter | Martech Zone
Antony fandraharahana 15 hampiasana Twitter
Sabotsy 28 Novambra 2009 Sabotsy, Oktobra 25, 2014 Douglas Karr
Mitohy ny tolona ataon'ny orinasa amin'ny antony fampiasana Twitter. Raiso ny kopian'ny Twitterville: Ahoana no ahafahan'ny orinasa miroborobo amin'ny manodidina ny tontolo iainana vaovao by Shel Israely. Boky mahatalanjona izay mirakitra ny fahaterahana sy fitomboan'ny Twitter ho fitaovana vaovao tsy mampino ho an'ny orinasa hifandraisana.
Raha namaky ilay boky aho, dia nanonona antony maromaro naniry hampiasa Twitter ny orinasa iray. Heveriko fa maro amin'izy ireo no mendrika tanisaina… miaraka amin'ny adihevitra… ary koa ny sasany vitsivitsy.
Mizara tapakila sy tolotra - satria mpampita hafatra mifototra amin'ny alalana ny Twitter, io no fomba tonga lafatra amin'ny fizarana tolotra. Namana tsara Adam Small nahita an'io tao amin'ny trano fisakafoanana ary indostrian'ny trano sy tany - izay nifangaroan'ny Mobile Alerts, Twitter, Facebook, Blogging ary syndication nanampy tamin'ny fampiroboroboana ny orinasan'ny mpanjifany rehetra… nandritra ny tsena ambany!
Fifandraisana amin'ireo mpiasa - raha tokony hamatotra ireo mpizara mailaka na handany fotoana amin'ny vahoaka any amin'ny efitrano fivoriana, Twitter dia fitaovana fiaraha-miasa lehibe. Raha ny marina dia izany no antony voalohany noforonin'i Odeo tamin'ny anarana hoe Twttr (Nidina aho sy ny e noho ny fanoratana kely kokoa amin'ny SMS!)
Mandray fitarainana ho an'ny mpanjifa - miady tsy an-kijanona ireo orinasa hisorohana ny fanasan-damba maloto hataony imasom-bahoaka. Ny mahatsikaiky dia ny mpanjifa aza mino serivisy kintana 5 intsony. Ny fampiroboroboana sy ny fitsikerana mahery vaika indrindra an'ireo orinasa dia matetika no tonga rehefa ny valintenin'izy ireo… na ny tsy fahavitrihan'izy ireo. Amin'ny fanekena ny tarainan'ny mpanjifa imasom-bahoaka, ny mpanjifa hafa dia afaka mahita ny karazana orinasa manao ahoana ianao tena ireo.
Mitady na mandefa asa - Ireo mpandray sy mpikaroka dia mampiasa Twitter handefasana momba ny asa tadiavina na ny fisokafan'ny asa. Amin'ny fikarohana geografika dia azonao atao ny mamantatra ny halaviran'ny tadiavinao asa ary afaka manambatra voambolana hafa hikarohanao.
Fikarohana sy fizarana fampahalalana - Raha nisy mpitsidika an'arivony latsaka aho dia lasa Twitter ny safidy hafa amin'ny motera fikarohana. Google koa dia nahatsapa izany, mampifangaro ireo vondrom-piarahamoninao amin'ny Internet amin'ny valin'ny fikarohana. Matetika, ny valiny azoko dia tena misy ifandraisany satria ireo izay manara-dia ahy dia miasa amin'ny indostria mitovy amiko.
Paikady fampidirana anaty - raha niasa tao amin'ny Compendium izahay dia nanomboka nahatsikaritra ny isan'ny sy ny kalitaon'ireo fidirana miditra izay tonga tao amin'ny tranonkalantsika avy amin'ny Twitter izay azo inoana fa hiova kokoa noho ny amin'ny fikarohana. Na dia nanome mpitsidika marobe anay aza ny motera fikarohana, dia nanomboka nanoro hevitra tanteraka ny mpanjifa izahay mba hiditra ao anaty Twitter ary hamolavola ny fahana amin'ny alàlan'ny fitaovana toa Hootsuite or Twitterfeed.
Business Humanizing - ireo orinasa tsy manana fifandraisana firy na tsy misy ifandraisany amin'ny besinimaro dia mahita fa ny fanomezana ho an'ny olombelona dia tsara ho an'ny orinasa ary takiana amin'ny fitazonana ny mpanjifa. Raha sahirana ny orinasanao amin'ny famelana ny fifandraisan'olombelona ary mosarena ara-pitaovana, mpanelanelana tsara i Twitter. Tsy mila arahi-maso tontolo andro izany (na dia omeko torohevitra aza… ny valiny haingana dia mahazo oohs sy aahs), fa ny valinteny avy amina orinasa tsy manana endrika ataon'ny olona tena manana avatar dia milay foana.
Personal Branding - miaraka amin'ny fandraharahana mahaolona dia ny fahafahan'ny mpiasa na ny tompona orinasa manangana marika manokana. Ny fananganana marika manokana amin'ny Internet dia mety hitarika zavatra maro… angamba na dia manomboka ny fahafahanao misafidy! Tiavo amin'ny asanao. Betsaka ny olona izay niahiahy ny amin'izay mety ho eritreritry ny orinasany raha manao ny tenany imasom-bahoaka izy ireo izao no mitady asa satria io orinasa io ihany no nandroaka azy ireo.
Fanatsarana ny fikarohana ao amin'ny Twitter miaraka amin'ny Hashtags - nanjary fahita matetika ny fikarohana ao amin'ny Twitter. Jereo amin'ny alàlan'ny fampiasana tenifototra mahomby ao amin'ny Tweet na amin'ny mekanisma autopost anao.
Tambajotra mahomby - ny tambajotra an-tserasera dia mpialoha lalana amin'ny tambajotra ivelan'ny Internet. Tsy afaka milaza aminao aho hoe firy ny vinavinako hitako tamin'ny alàlan'ny Twitter. Ny sasany aminay dia nifankahalala amam-bolana maro talohan'ny tena nampifandraisina ivelan'ny serasera, saingy nanjary tany amin'ny fifandraisana ara-barotra sasany izany.
Marketing marketing - Twitter no lehibe indrindra amin'ny marketing amin'ny viral. Ny Retweet (RT) dia fitaovana matanjaka be… manosika ny hafatrao amin'ny tamba-jotra mankany amin'ny tambajotra ao anatin'ny minitra vitsy. Tsy azoko antoka fa misy haitao viralo haingana kokoa eny an-tsena izao.
Fund Raising- - Nanoratra ohatra tsara dia tsara momba ny fomba fampiasan'ny orinasa amin'ny fomba mahomby ny Twitter ho an'ny asa soa. Ny tombony dia ho an'ny orinasa sy ny fiantrana - satria ny fandraisan'anjaran'ireo orinasa ireo dia naseho tsara kokoa tao amin'ny Twitter noho ny vao nanonona teny tao amin'ny tranonkala iray tany ho any.
Famandrihana an-tserasera - Ankoatry ny tapakila sy tolotra dia misy olona sasany aza mandray ny baikon'ny mpanjifa amin'ny Internet. Nanoratra momba ny fivarotana kafe i Shel izay ahafahanao mokaoka amin'ny baikoo ary andao haka azy. Tena milay!
Fifandraisana amin'ny vahoaka - Koa satria ny Twitter dia miasa amin'ny hafainganam-pandehan'ny fanoratana tarehin-tsoratra 140, afaka mandroso mialoha ny rehetra ny orinasanao… ny fifaninanana, ny haino aman-jery, mivoaka ... amin'ny fananana paikady PR mahery setra mampiditra Twitter. Rehefa manao ny fanambarana aloha ianao dia manatona anao ny olona. Aza avela ho an'ny haino aman-jery nentim-paharazana na ny mpamaham-bolongana ny marina… mampiasa Twitter hibaiko sy hitarika ny fifandraisana.
Mampandrata fampandrenesana - manana olana amin'ny orinasanao ary mila mifandray amin'ireo mpanjifanao na ny vinavinanao? Twitter dia mety ho fomba iray lehibe anaovana izany. Pingdom aza dia nanampy ny fampandrenesana Twitter ho azy ireo serivisy… hevitra tsara tokoa izany! Afa-tsy… rehefa midina ny Twitter dia tsy afaka mampiasa ny serivisy izy ireo 😉 Ny fampandrenesana dia mety ho zavatra lehibe ihany koa… angamba hampandrenesana ny mpanjifanao fa miverina ao anaty tahiry ny vokatra iray.
Niresaka i Shel fa ny sasany amin'ireo tranga fampiasana orinasa ao amin'ny bokiny dia tsy azo lazaina mivantana amin'ny fidiram-bola. Na dia marina aza izany dia azo refesina amin'ny farany izy ireo ary ampiharina ny tamberim-bola. Matoky aho fa ny sampandraharaha misahana ny serivisy ho an'ny mpanjifa izay manara-maso ny halavan'ny antso sy ny sioka dia afaka manao fandrefesana raha toa ka mampihena ny salan'isan'ny antso antonony ny Twitter satria ampahafantarina ny valiny. Toy ny amin'ny # 15… raha midina ny tranokalako ary misy ny sioka… dia tsy ho mora antsoin'ireo olona ireo aho hampahafantatra ahy satria hitany fa efa nanamafy ny olana aho.
Inona no tsy hitako?
Tags: tapakilafitarainan'ny mpanjifafihenam-bidyfifandraisan'ny mpiasamahita asamampihiditra barotrafitadiavana vaovaotolotrafizaranaShel IsraelyTwittertwitterville
Quark Promote dia manolotra vahaolana Hybrid ho an'ny filanao famoahana orinasa
Ny olana amin'ny “Tsy misy hevitra”
29 Novambra 2009 à 12:36
Wow, lisitra mahafinaritra ity Douglass. "Inona no tsy ampy ahy?" toa ny fomba tsara hamaranana ity lahatsoratra ity satria ny zavatra rehetra azoko eritreretina dia efa tafiditra ao avokoa. Lazaiko aminao izay tsy hitako >> ity boky ity eo amin'ny talantalako. Lahatsoratra fahatelo androany no voatonona ka tena omeko hovidiana amin'ity faran'ny herinandro ity. Misaotra amin'ny fampahalalana. -Paul
30 Novambra 2009 à 12:53
Matoky ianao ry Paul! Boky tena tsara izy io – faly ianao mametraka azy ao anaty lisitra.
29 Novambra 2009 à 1:49
Lahatsoratra mahafinaritra Douglas! Misaotra anao nanome anay fitaovam-piadiana bebe kokoa hivarotra Twitter sy marketing media sosialy ho an'ny mpanjifanay.
Misaotra Oscar! Mahaliana fa mbola mila bala isika, sa tsy izany?
Jan 28, 2010 ao amin'ny 10: 25 AM
Avy amin'ny mailaka Business Communication. FYI.
17 Novambra 2011 à 7:51
Hevi-dehibe ireo, ary tena hita tokoa fa marina teo amin'ny indostriantsika. Satria orinasa mpanao fanadihadiana an-tserasera izahay, dia manatona ahy ny olona amin'ny alàlan'ny Twitter sy Facebook miaraka amin'ny olan'izy ireo matetika toy ny fiantsoana ny fanohanan'ny mpanjifa. Ary fantatrao izany, satria mahatsapa aho fa mifandray amin'izy ireo amin'ny alàlan'ny tambajotra sosialy, manao izay hahazoana antoka fa voakarakara ny fitarainany. Nahazo valin-kafatra tsara maro izahay tamin'izany, ary araka ny zavatra niainako, dia miteraka fahatsapana fiaraha-monina izany. Ny orinasa rehetra tsy ao amin'ny Twitter amin'izao fotoana izao dia very tanteraka!